မေစစ်ပိုင်| November 10, 2012 | Hits:8,959
4 | | ပုဂံရောက် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website kyawmoe November 10, 2012 - 6:54 pm	ဆုတ်ပဲ့တဲ့ အကျင့်တွေနဲ့. ဒီမိုကရေစီ တူသလား တန်သလား ဗိုလ်ချူပ် ပြောခဲ့တယ် ရိုင်းတယ်လို့မထင်မိဘူး
Reply	thuratun November 11, 2012 - 12:26 pm	ဒီလိုဖြစ်တာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး၊တိုင်းပြည်ကိုနှစ်(၆၀)လောက်စစ်သားတွေ၊စစ်သားလူ